Seteembar | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2012
War deg deg ah: Shariif Xassan oo Eedeeymo kulul dusha uga tuuray Madaxweyne Xassan Sheikh !!!
Seteembar 30, 2012
Guddoomiyihii Hore ee Baarlamaanka Somalia Shariif Xassan Sheikh Aadan ayaa iminka Eedeeymo dusha ugu tuuray Madaxweynaha Talada dalka gacanta ku haaya isaga oona ku Eedeeyay in Madaxweyne Xassan Sheikh uu doonaayo inuu waqtiga iska qaado
Shariif Xassan ayaa sidoo kale Madaxweynaha u eedeeyay inuu doonaayo in uu soo xulo Raisul wasaare aan siyaasadda sal iyo baar ku lahayn islamarkaana kasoo jeeda dhanka Xarakadda Damul-Jadiid oo uu ku sheegay in uu iminka Fakir ahaan taabacsan yahay Xarakadaasi
Dhanka kale Shariif xassan ayaa sheegay in Madaxweynaha uu lumiyay inta badan waqtigiisa waxa uuna sheegay in Magacaabista Raisul wasaaraha uu ka dhigaayo mid Culus hayeeshe Raisul wasaaraha uusoo wado uu diyaarsana kahor inta aan loo dooran madaxweyninimada
Si kastaba ha ahaatee Shariif Xassan oo isagu ku qanacsanaa Magacaabista Madaxweynaha Cusub ayaa iminkana dhaliilo aan la garaneynin halka ay salka ku hayan usoo jeediyay Madaxweyne Xassan Sheikh taasoo ka turjumeyso inuu waayay siyaasadii uu ka damacsanaa Dowladda Cusub ee iminka Somalia laga yegleelay.
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa berito oo Isniin ah markii ugu horeysay safar dhanka cirka ah kaga ambabixi doona magaalada Muqdisho, sida ay caawa Raxanreeb u sheegeen saraakiil madaxtooyada oo aan la hadalnay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa safarkiisa koowaad ku tagi doona magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasoo fatahaad ka dhalatay wabiga Shabeelle ay sababtay in magaalada ay dad badan isaga barakacaan iyadoo dadka kale ee magaalada ku harayna ay aad u liidato.
Mid ka mid ah saraakiisha madaxtooyada ayaa Waajidpress u xaqiijiyey in madaxweynuhu marka uu dhameysto booqashada dhulka ay fatahaadu saameysay ee magaalada Beledweyne kadib uu u duuli doono magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Booqashada Garowe :
Wararka ayaa intaa raacinaya in madaxweyne Xasan Sheekh oo ay wehlinayaan qaar ka mid ah saraakiisha madaxtooyada ay kulamo la soo qaadan doonaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole.
Wax badan lagama oga kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo C/raxmaan Faroole dhexmari doona waxyaabaha looga hadlayo rasmi haan, hase yeeshee wuxuu kulanka imaanayaa xilli weli madaxtooyada Villa Soomaaliya ay ku guda jirto wadatashiyada ku aadan magacaabista raysul wasaaraha cusub ee dalka iyadoo waqtiga 30-ka cisho ee madaxweynuhu sharci ahaan u heysto inuu ku magacaabo wasiirka koowaad ay hadda ka harsan tahay illaa 10 maalmood oo kaliya. Arimaha magacaabista raysul wasaaraha iyo aragtida madaxweynaha Puntland ayaa suurtagal ah in kulanka lagu soo qaado.
Waxaa kaloo jirtay in madaxweyne Faroole uu si weyn u soo dhoweeyay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo uusan Faroole ka soo qeybgalin caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee dalka ee Muqdisho ka dhacay 16-kii bishan.
Sida saraakiisha Villa Soomaaliya ay cadeeyeen, booqashada madaxweynaha uu ku marayo labada magaalo ee Beledweyne iyo Garowe waxay qaadan doontaa hal maalin wuxuuna isla berito gelinka dambe dib ugu soo laaban doonaa Muqdisho.
Faarax Sakiin oo seeftiisa galka kala baxay
Muqdisho (waajidpress): isbedel dhanka shaqooyinka ah oo si hoose u socda ayaa ka bilawday xafiisyada xarunta madaxtooyada Soomaaliya “Villa Soomaaliya” ee Muqdisho, sida ay wasjidpress ka ogaatay saraakiil madaxtooyada jooga.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankii ugu horeeyay ee uu la yeeshay shaqaalaha madaxtooyada saddex maalmood kadib doorashadii dhacday 10/09/2012, ayuu ugu ballanqaaday shaqaalaha madaxtooyada inaysan ka welwelin shaqooyinkooda oo ay sii joogi doonaan taasoo dad badan u fasirteen hadal sabarsiin ayaa hadda waxaa ku yimid isbedel.
Sida ilo wareedyada u waramay waajidpress ay sheegayaan waxaa isbedelkan xoogiisa ku lug leh la taliyaha madaxweynaha Faarax Sheekh C/qaadir oo hadda ah ninka talooyinka iyo go’aanada madaxtooyada ay ka soo fulaan. [Akhri hab dhaqanka Faarax ee Villa Somalia]
Saraakiil la ceyriyey
Tan iyo markii madaxweynaha cusub iyo shaqaalihiisa ay sida rasmiga ah u degeen xarunta Villa Soomaaliya waxaa socday shaqo ka fariisin si qunyar ah loo sameynayey taasoo aan su weyn loo dareemin balse ahayd qorshe in dhoweyda la filayey inuu dhici doono.
Sida Waajidprrss ay u sheegeen ilo wareedyada waxaa saraakiisha shaqada laga qaaday ka mid ah:-
1- Mursal Saney, oo ahaa Madaxii hab maamuuska madaxtooyada (Protocol) ee dawladii Sheekh Shariif. Waxaa lagu bedelay nin lagu magacaabo Kamaal Daahir Guutaale oo horey uga soo shaqeeyay shirkii ansixinta dastuurka.
Xil magacaabista Kamaal Daahir waxaa kaga horeeyey Jamaal Maxamed Baaroow oo ka mid ahaa xubnihii xisbiga PDP (Xisbiga Nabadda iyo Horumarka) ee madaxweyne Xasan Sheekh. Jamaal Baarow waa suxufi caan ahaa kana soo jeeda beelaha Shanaad, laakiin Jamaal Baarow ma ahayn nin miisaan ku leh Faarax C/qaadir agtiisa sidaasi darteedna xilka waxaa lagu wareejiyey Kamaal Guutaale oo degaan ahaan ka soo jeeda degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Saraakiisha madaxtooyada badankood way ku wareereen markii ay maqleen in Kamaal Guutaale loo magacaabay madaxa guud ee hab maamuuska madaxtooyada waayo dad badan baa u heystay inuu ku dhowaa raysul wasaarihii hore C/weli Gaas- walow magacaabistiisa loo dhigay qaab kumeelgaar ah.
2- Maxamed Macalin, oo ahaa agaasimihii guud ee shaqaalaha madaxtooyada isla markaana ahaa nin ay aad isugu dhowaayeen Sheekh Shariif, waxaana lagu bedelay Ibraahim Sheekh Muxyidiin. Ibraahim wuxuu xubin ka ahaa xisbiga PDP,- mida ugu muhimsana waxay qaraabo dhow yihiin mid ka mid ah xaasaska madaxweynaha cusub.
3- Maxamed Maxamuud Koofi, oo ahaa madaxii amaanka madaxtooyada kana mid ahaa saraakiishii hore ee Maxkamadaha Islaamiga ee la soo shaqeeyay Sheekh Shariif ayaa isaguna laga xayuubiey shaqada. Waxaa isaguna lagu bedelay C/xakiin Farey oo ka tirsanaa saraakiisha Xisbiga PDP.
C/xakiin Farey wuxuu kaloo ka tirsanaa hay’adda nabadsugida, ku dhowaanshihiisa Faarax C/qaadir darteed ayaana la rumeysan yahay in loogu abaalmariyey xilka madaxa amaanka madaxtooyada.
Waxaa sidoo kale la ceyriyey shaqaalihii dhanka cunto karinta iyo kuwii qaabilsanaa adeegga guud ee madaxtooyada oo dhamaantood lagu bedelay kuwo cusub. Mid ka mid ah il wareedyada ayaa sheegaya in cunto kariyaha madaxweynaha laga dhigay nin aan magaciisa helin oo horey uga shaqeyn jiray hay’ad uu lahaan jiray Faarax C/qaadir sanadihii 2000 kaasoo hadda dib loogu yeeray.
Saraakiisha warfaafinta iyo kuwa kale xiriirka dadweynaha ayaa dhamaantood isbedelku ku soo fool leeyahay sida ilo wareedyadu ay sheegayaan.
Dhanka kale labada xaas ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyaguna soo degay Villa Soomaaliya, iyadoo xaaska weyn ee madaxweynaha oo deganeyd dalka Kenya ay dhowaan ka soo guurtay halkaasi, waxaana ay noqoneysaa marwada koowaad ee dalka “the first lady”.
Wariye Fahad Yaasiin oo madaxtooyada lagu arkay
Madaxii Telefishanka af Carabiga ee Al-Jasiira qeybtiisa xafiiska Soomaaliya, Fahad Yaasiin oo labo usbuuc ka hor iska casilay shaqadii telefishanka Al-Jasiira ayaa isaguna lagu arkay madaxtooyada. Fahad wuxuu kaalin weyn ku lahaa ololihii doorashada madaxweyne Xasan Sheekh sidaasi darteedna wuxuu hadda u arkaa inuu helay fursad xil uu kaga heli karo madaxtooyada.
Ka sokow ololaha doorashada, Fahad Yaasiin waxay qaraabo dhow yihiin Faarax C/qaadir oo ayna isku koox ku wada jiraan, waxaana dad ku dhow ay Raxanreeb u sheegeen in xitaa iscasilaada Fahad Yaasiin uu qeyb ku lahaa Faarax C/qaadir oo hadda u qalqaalinaya Fahad in xil laga siiyo dawlada cusub.
Kaararka aqoonsiga madaxtooyada
Sidoo kale masuuliyiinta madaxtooyada ayaa dhowaan shirkad maxalli ah heshiis kula gashay inay u daabacdo kaarar cusub oo aqoonsiga madaxtooyada ah si loogu bedelo kaararkii hore ee lagu geli jiray Villa Soomaaliya kuwaasoo saaxiibada cusub ee madaxtooyada ay ka cabsi qabaan in loogu soo gabado loogana fogaado in xubnihii kooxda Aala Sheekh ee horey ugu awooda badnaa madaxtooyada inay madaxtooyada yimaadaan.
Tallaabooyinkan ayaa lagu micneeyay olole ballaaran oo kooxda cusub ee Dam Jadiid ee hadda awooda muuqata ku leh madaxtooyada ay rabaan inay uga takhalusaan kooxda Aala Sheekh oo xukunka looga guuleystay. Beryihii u dambeeyay ayaa si weyn loo arkayey xubnaha Dam Jadiid oo madaxtooyada ku sii xaroonaya.
Maxay yihiin Dam Jadiid?
Dam Jadiid, waa erey af Carabi ah oo micnihiisu yahay “Dhiiga Cusub” [New blood]. Sida xubnaha qaarkood oo aan la sheekeysanay ay noo sheegeen magacan wuxuu soo bilawday sanadihii 2000 markaasoo ahayd xilligii ururka AL-Islaax (oo u nasab sheegta Kooxda Ikhwaanul Muslimiin) ay u kala jabeen labo garab. Garab u badnaa dhalinyaro aad u firfircooneyd ayna ku jireen raggii jaamacadaha kasoo baxay xilligaasi ayaa la baxay “DAM JADIID” waxayna kooxdan markii dambe noqdeen kuwii taageeray kacdoonkii Maxkamadaha Islaamiga ee sanadkii 2006 ka curtay koonfurta Soomaaliya, xilligaasi ayaana si fiican uu u soo bannaanbaxay khilaafka labada garab ee ururka Al-Islaax ka dhexeeya.
Garabka labaadna, waxay u badnaayeen odayaashii aas aasayaasha Al-Islaax ee magaca dheer lahaa, waxayna xubnahan ahaayeen kuwii markii hore gacanta ku hayey talada iyo maamulka guud ee ururka waxayna ka soo horjeesteen kacdoonkii Maxkamadaha oo ay xitaa dhowr jeer si cad u naqdiyeen siyaasadii Maxkamadaha Islaamiga ee Soomaaliya. Garabkan oo hadda loo yaqaano “Qadiim“ [kuwii hore] ayaa weli heysta magaca guud ee Xarakada Al-Islaax.
Madaxweyne Xasan Sheekh isagu asal ahaan kama tirsanaan jirin kooxda Dam Jadiid, laakiin waxaa saameyn weyn ku yeeshay Faarax Sheekh C/qaadir oo mudo dheer ay saaxiib ahaayeen kana mid ahaa raggii horey uga gadooday Al-Islaaxdii qadiimka ahayd. Faarax isagu asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa koox diimeed aad u yar oo aan ka tirsaneyn Al-Islaax oo lagu magacaabo ‘ISXAAQIYA’. Kooxda Isxaaqiya waxay dhaqdhaqaaq firfircoon ku leedahay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo rag ganacsato oo iyaga ka tirsan ay degan yihiin.
Waxaa kaloo la sheegaa inay xiriir fiican la leeyihiin dawlada Qadar oo doorashadii dhowaan ka dhacday Dalka ee madaxweyne Xasan Maxamuud lacag fara badan ku bixisay.
Loolanka Aala Sheekh iyo Dam Jadiid, ma ahan mid cusub ama ka dhashay doorashada Xasan Sheekh Maxamuud, hase yeeshee sida ay leeyihiin xubno labada dhinac ka kala tirsan oo Raxanreeb ay la kulantay waxaa jira mabaadii’ waaweyn oo ay labada dhinac isku diidaanayeen mar walba kuwaasoo sabab u ahaa in markasta oo koox ka mid ah labada kooxood ay meel qabsato ay isaga ilaalin jirtay inay kooxda kale ka soo agdhowaato.
Wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo iyo ciidanka huwanta oo..
Ciidamada Soomaalida iyo Kenya ayaa maanta cagta Saaray qaybo kamid ah magaalada Kismaayo kuwaas oo lugta ku socday.
Dagaalyahanada Huwanta ayaa waxay xilligaan cagaha la-soo galeen Xaafadda Calanley oo dhacda Galbeedka Magaalada Kismaayo.
Warar kale ayaa sheegaya in Ciidamadda Huwanta ay cagaha galiyeen Xaafadda Via Afmadow oo ka tirsan Xaafadaha hoos-tagga xaafadda Calanley, oo ka mid ah afarta xaafadood ee ugu waaweyn ee Magaalada Kismaayo.
Ciidamadda Huwanta ayaa waxay xaafadda Calanaley ay kaga soo tallaabeen dhinaca Deegaanka Sacmoole, oo ka tirsan Deegaanada hoos tagga Magaalada Kismaayo ee Xaruunta Gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Ciidamadda Huwanta ay ku hubeysan yihiin qoryaha fud fudud ee nooca gacanta lagu qaato, iyadoo aysan jirin wax iska caabin ah oo ay kala kulmeyn rag bistoolado ku hubeysan, oo kooxda Shabaab taabacsan oo ku haray sida la-rumeysan yahay Magaalada Kismaayo.
Dadka kale oo kusugan Kismaayo ayaa iyagana sheegaya in ciidamada aysan magaalada galin balse ay qorshaynayaan in Galabta ay qaybo kamid ah magaalada la wareegaan.
Xaalada Magaalada ayaa dagan mana jirto maanta wax dil ah oo ka dhacay magaalada.
War deg deg ah: Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ee ku sugan Baladweyn oo lagu soo Waramayo in Magaalada Faarujiyeen kadib markii ..
Wararka laga helaayo Magaalada Baladweyn ee Xaruta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM katirsan in ay ka baxeen qeybo badan oo kamid ah Magaalada Baladweyne.
Ciidamadan ayaana ka baxay Fariisimo dhoor ah ay ku lahaayeen gudaha iyo Daafaha Baladweyn kadib markii uu saameyn badan xarumahooda ku yeeshay Roobabkii badnaa ee Magaaladaasi ka da’ayay iyo fataahidii Wabiga Shabelle uu sameeyay.
Ciidamada AMISOM ee kasocda Dowlada Jabuuti ayaa markii hore ku sugnaa Xarun Ciidan ay dhawaan kala wareegeen Ciidamada Itoobiya ay kaga Sugnaayeen Baladweyn halkaas ay saakay ka guureen Ciidamada Jabuuti.
Ciidamadan Jabuutiyaanka ah ayaa sida Wararka ana ku heleyno waxaa la geeyay Goob lagu Magacaabo Baqaarada oo Gees ka ah Magaalada Baladweyn ee Xarunta Gobolka Hiiraan mhalkaas ay kasii dhigteen Fariisimo KMG Ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa iyaga lasoo sheegayaa in ay ka guureen Fariisimo ay ku lahaayeen halka loo Yaqaan lama Galaanka oo Baladweyn katirsan Waxa ayna u guureen Deegaanka buurta Jande Kundisho oo duleedka ka ah Magaalada Baladweyn ,
Dhawaan ayey aheed markii Fatahaadyo balaaran iyo Roobabab Mahiigaan ah saameyn ku yeesheenm Magaalada Baladweyn taa oo keentay in dad badan ku dhintaan sidoo kale Qoysas badan ay hada noqdaan Banaan joog maadaama guryahoodii ay samaeeyeen Roobabka.
“Aqoonsiga Somaliland London Iyo Addiss Ababa Ma Yaalo Ee Waxa Uu Yaalaa Muqdisho ” Dr. Gaboose
WAAJIDPRESS – 30 sept2012
Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka Ummada Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa sheegay in Aqoonsi Somaliland baadi goobay muddad labaatanka sanno dhaafay inuu yaalo Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Somalia, isaga oo rajo fiican ka muujiyey wada hadalada Somaliland iyo Somalia u socdaa in ay ka soo baxaan natiijo Somaliland qadiyadeeda lagu aqoonsado.
Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo warbaahinta kula hadlayey Garoonka Diyaaradaha ee Herthrow Airport oo uu gaadhay Maalintii khamiistii, ayaa waxa kale oo uu ka hadlay kalsoonida uu Ururkoodu ku qabto Komishanka Doorashooyinka Somaliland.
Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa kale oo uu sheegay inay urur ahaan soo dhaweynayaan isbadalka siyaasadeed ee Somaaliya, balse waxa uu uga digay siyaasiyiinta Soomaalida in aanay u qaadan in shacabka Somaliland ay ka noqdeen gooni isku-taagooda, waxaanu yidhi “Bini’aadamku wuxuu kaga duwan yahay abuurista kale waa hadalka, Mashaakil kasta oo jirana wada-hadal baa lagu xalin karaa, dariiqa wada-hadalku waa ka ugu qiimaha badan ee Dadka ka badbaadin kara bur-bur iyo dariiqyo qaloocan, markaa waanu dhiiri-gelinaynaa oo waanu soo dhaweynaynaa wax alaale iyo wixii dariiqa wada-hadalka lagu heli karo, qaadiyadda Somaliland ee Shacbigu goostay waa wax cad, waa wax aan mugdi ku jirin”.
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Ummadda Dr Maxamed Cabdi Gaboose oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi “ Aqoonsiga Somaliland ma yaalo London, Addis Ababa iyo Kenya, laakiin waxa uu yaala Xamar, Maaha in himilada Umaddani mugdi ku jirto mar hore ayey cadaysteen, muddo dheer-baa dadka qarkii siyaasad gurucan oo cadawtinimo ah ku dhaqmayeen, taana waxaanu qabnaa in wad-hadalkani furayo Albaabka ah in la wada-hadlo”
Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka Ummada waxa uu sheegay in Ururkoodu kalsooni buuxda ku qabo Guddiga doorashooyinka Somaliland, waxaanu yidhi “Annagu (Ururka Ummada) kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa Komishanka doorashooyinka Qaranka, Komishankuna dalka taariikh ayey leeyihiin oo ay hore uga kasbadeen Beesha Caalamka iyo shacabka Somaliland, waana rag dhalinyaro ah oo hawshooda ka adag oo doorashadii dalka ay ka qabteen si wanaagsan u qabtay. Taageerayaashayadana waxa aanu u sheegaynaa in aanu ku kalsoonahay Komishanka doorashooyinka qaranka”
Madaxwayne Xassan Sheikh Iyo C/welli Gaas Maxaa Kala Haysta
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sheikh Maxamuud ayaa Maalmihii ugu danbeeyay wuxuu Telfoonka si is daba jooga ugula hadlayay C/welli Gaas oo ku maqan Wadanka Maraykanka halkaasi oo shirar looga hadlayo Arimaha soomaaliya ka dhaceen.
Madaxwaynaha ayaa kula balamay C/welli inuu Muqdisho iska soo xaadiryo marka uusoo dhamaado Shirka New york, Waxana haatan Muuqata in C/welli Gaas uu oga baxay Madaxwaynaha oo uu xiligani wali ku maqanyahay dalka Dibadiisa.
Xassan Sheikh Maxamuud ayaa damacsanaa inuu Magacaabo Raizul Wasaaraha Maanta oo Taariikhdu ku beegantahay 29bisha waxaana dib u dhaca ku yimid sababay C/welli Gaas oo wali ka iman Safarkii loo diray waxaana hubaal ah inuu Doonayo dib u dhac inuu ku yimaado qaybaha kala duwan ee Hay’adaha Dowlada si loo yiraahdo Dowladani waa mid oga dartay Shacabka.
Madaxwaynaha ayaa ilaa Maanta wada olole kii ugu danbeeyay oo C/welli Gaas loogu yeerayo inuu Muqdisho ku yimaado si deg dag ah si loosoo Magacaabo Raizul Wasaaraha Cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
C/welli Gaas ayaa la sheegay inuu si gaara dib u dhacyada ku imanaya ku dhawaaqista Xilka Raizul Wasaaraha uu qayb xoogan ka yahay, kadib markii uu ogaaday inaan isaga loo magacaabayn Jagadaasi.
Sikastaba Xassan Sheekh Maxamuud ayaa looga Fadhiyaa inuu Saacadaha soo socda ku dhawaaqo magaca Raizul Wasaaraha Cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Kismaayo (RBC) Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo saaka ayaa sheegaya in xalay markale duqeyn madaafiic ah lagu garaacay qeybo ka mid ah magaalada iyadoo sida dadka deegaanka ay sheegayaan aan la ogeyn wax khasare ah illaa hadda.
Duqeyntan oo ahayd mid dhanka badda ka imaaneysay ayaa la sheegayaa in gudaha ay kju dheceen dhiwr gantaal kuwaasoo xoogooda si weyn dadku u maqlayeen habeenkii xalay. Sidoo kale meelo duleedka galbewed ka xigta magaalada ayaa lagu soo waramayaa in madaafiicda ay ku dhacayeen.
Dadka ku nool magaalada Kismaayo oo qaarkood saaka aan la hadalnay ayaa sheegaya inaysan garaneyn sababta duqeynta weli ay ugu socoto magaalada maadaama ciidamadii ururka Al-Shabaab ay isaga bexeen magaalada Kismaayo.
Xaalada magaalada ayaa weli ag sidii ay ahayd maalintii shalay, waxaana dadka magaalada ay noo sheegeen in weli magaalada lagu dhex arkayo maleeshiyaad fara badan oo magaa;llada dhex socda kuwaasoo aan cidna ka amarqaadanin.
Dhanka kale dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dawlada Kenya iyo kuwa Soomaalida ee wada socda iyo ciidamada Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka galbeed gaar ahaan agagaarka tuulada Canjeel oo 30-km ka baxsan magaalada halkaasoo ay weerar ku soo qaadeen Al-Shabaab.
Faahfaahin buuxda lagama hayo dagaalkaasi, dhinacyada dagaalameyna kama hadlin illaa hadda.
Sarkaal ka tirsan Dowlada oo lagu Toogtay Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi lagu qaarajiyay Sarkaal ka tirsan Dowlada Soomaaliya .
Kooxo hubeysan oo aan la aqoon heebtooda ayaa Toogtay Sarkaalka , xili uu ka soo baxay Masaajid ku yaala Xaafad ka tirsan Magaalada Baydhabo.
Sarkaalka la toogtay oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Indheey ayaa la sheegay in la Toogtay isagoo ka soo baxay Masaajid ku yaala Xaafada Mursal oo ka tirsan Xaafadaha Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay.
Sida wararku sheegayaan Sarkaalka ayaa lagu dhuftay ilaa Shan Xabadooda , iyadoo sarkaalka uu isla goobta ku naf baxay .
Dilka Sarkaalka ayaa wxaaa ka dambeeyay kooxo ku hubeysan Bastoolado , waxayna dilka kadib u suuragashay inay ka baxsadaan goobta.
Ciidamada Dowlada oo Dilka kadib soo gaaray goobta ayaa bilaabay sidi caadada ahayd baaritaano , iyagoo gacanta ku soo dhigay Shan Nin oo lagu tuhmay inay ka dambeeyeen Dilka Sarkaalka.
Sarkaalka la dilay ayaa si weyn looga yaqaanay Magaalada Baydhabo , waxaana uu ka tirsanaa Waaxda Canshuur qaadista ee Magaalada Baydhabo.
Saraakiil ka tirsan kuwa Baydhabo ku sugana ayaa balan qaaday inay sameyn doonaan baaritaano lagu raad joogo Raggii dilay Mukhtaar Indheey oo ka tirsanaa Saraakiisha Baydhabo ee Dowlada Soomaaliya.
WAR DEG DEG AH:- Ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Ahlu-sunna oo u ruqaansaday degmada Ceel-buur.
Wararka haatan naga soo gaaraya gobalka Gal-gaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Ahlu-sunna Waljaneeca oo garab sanaaya kuwa Itoobiya ay u dhaqaaqeen degmada Ceel-buur ee gobalka Gal-gaduud halkaa oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka mid Xarakada Al-shabaab.
Ciidamadaan ayaa la sheegayaa inay ka kala baxeen degmooyinka Dhuusa Mareeb iyo Guri-ceel waxaana ay sheegeen in xilligaan ay ka go’an tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan degmadaasi iyo deegaanada kale ee Gal-gaduud ka joogaan ciidamada Al-shabaab.
Dad goob joogayaal ah ayaa inoo sheegay inay arkeen ciidamo aad u badan misane wata dabaabaadka dagaalka oo aad u badan kuwaa oo lagu doonaayo in lagula dagaalamo ciidamada Xarakada Al-shabaab.
Dhanka kale ciidamada Al-shabaab waxa ay wadaan dhaq dhaqaaqyo aad u xoogan misane ay ku doonayaan inay kaga hortagaan ciidamadaan Itoobiya iyo kuwa Ahlu-sunna ee halkaasi ku wajahan dhankooda, waxaana xaaladda ay tahay mid aad iyo aad u cabsi ah.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2012.